တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: တောင်ဆင်းအတိုင်း စက်ဘီးစီး ကြရမဲ့ Stickman Downhill version1.5 APK
တောင်ဆင်းအတိုင်း စက်ဘီးစီး ကြရမဲ့ Stickman Downhill version1.5 APK
လှပပြီး သေသပ်လှတဲ့ graphic design နဲ့ ကစားလို့ကောင်းတဲ့ game လေးတစ်ခုပါ။ လှပတဲ့ရှုခင်းပေါင်း 80 ကျော်ကို ဒီဇိုင်းအနေနဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ နောက်ခံ design တွေကိုလည်းပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ နောက်ခံဒီဇိုင်းအနေနဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တာတွေကတော့ သစ်တောနဲ့တူတဲ့ အရောင် ဒီဇိုင်းတွေပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း၊ ပင်လယ်ပြင်ကိုနောက်ခံ ဒီဇိုင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း၊ ညပိုင်းအခြေနေတစ်ရပ်အဖြစ် ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။
စက်ဘီးစီးရမဲ့ အခြေအနေတွေကတော့ Free ride tracks လွတ်လွတ်လပ်လပ် စက်ဘီးစီးရခြင်း၊ Trial tracks
စမ်းသပ်ပြီးစက်ဘီ စီးရခြင်း နဲ့ Downhill tracks တောင်ဆင်းအတိုင်း စက်ဘီးရခြင်းတွေဆိုပြီးတော့ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဗျာ။ အဲ့ဒီထဲကမှ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ကိုယ်ကြိုက်သလို ရွေးချယ်ကစားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
စက်ဘီးတွေကိုလည်း အများကြီးရွေးချယ်ခွင့်ရှိသလို၊ နေ့နဲ့ည ကြိုက်တဲ့အချိန်ကိုရွေးချယ်ပြီး ကစားနိုင်ပါသေးတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲရေးပေးတော့မယ်ဗျာ။ တကယ်လို့ ကျန်တာတွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကစားရင်းနဲ့ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီ game လေးကိုကစားဖို့အတွက်တော့ android version 2.2 နဲ့အထက်မှာ ဆိုရင် ကစားနိုင်ပါပြီဗျာ။
အောက်က link တွေကနေ download လုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Aung Ko Htet (IT Studier)
Posted by အောင်မျိုး at 2:39 AM
Labels: Android Os Games များ
MPT နာမည်ပြောင်းမယ် apk for Android
Mafon (သို့) Android ကက်ဆက်လေး 5MB
USBUtil v2.1 Ultimate for PS2 USB Mode (PS2 Gameေ...
Huawei Ascend G300 (u8815) Root & မြန်မာ Font
Super Film Stars Show Vol-2
P6 နဲ့ Nexus တွေကိုပါ Root နိုင်တဲ့ RootGenius or ...
Mobile Guide Issue Vol-2 ၊ Issue-122 (30.9.13)
Router ကို Setting ချပြီး WiFi ပြန်လွှင့်နည်း
Moborobo PC Suite ရဲ့ မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ Mobo Video P...
မိမိတို့ ရဲ အကောင့် တွေကိုလုံခြုံရေးနှစ်ထပ်တိုးမြှ...
ဥက္ကာဦးသာ – Love Songs (2013) [Album]
ဟက်ကက် – ဂိမ်းကစားပွဲ
ဟန်ထွန်း – Collection
ဆိုတေး-(မီးအိမ်ရှင်) ဒီဖြိုး ၊ ဒေးဗစ်
VA – ဂန္တဝင်သစ် ဂီတကဗျာ [Album]
ဗညားဟန်၊ ရဲထိုက် – မုန်းရာဇဝင် အခန်းဆက် [Album]
ယုန်လေး – လူဆိုးကြီးများနေ့ (2013) [Album]
မင်းမင်း – ငါတကယ်လွမ်းတယ် (2013) [Album]
ဒိုဒိုး – ယိမ်းနွဲ့နွဲ့ည (2013) [Album]
လုံးလုံး – နင်သိတဲ့တစ်နေ့ (2013) [Album]
Samsung Glaxy Ace3Galaxy Ace3GT-S7270, GT-S727...
ဆူဇီ – တတိယရန်ခုန်သံ [Heartbeat No.3] (2013) [Albu...
စိုင်းလိက် – ဆယ်ကမ္ဘာတိုင် (2013) [Album]
Facebook vs Gmail အကောင့်ကို ဖုန်းနံပါတ်မတောင်းအော...
ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကပုံကိုဖမ်းယူပေးမယ့် Scerrnshot HD...
ကားပြိုင်ဂိမ်းအလန်း For Pc 85MB
Auslogics Disk Defrag Pro 4.3.0.0 Final Full Versi...
Advanced SystemCare Pro 6.4.0.292 နောက်ဆုံးထွက် Fu...
CCleaner Business Edition 4.06.4324 နောက်ဆုံးထွက် ...
ဖုန်း Model ပေါင်း ၁၀၀၀၀ ကျော် Android 4.3 ထိ Root...
စွန့်စွန့်စားစား ဆိုင်ကယ်မောင်းတဲ့ဂိမ်း Urban Tria...
သင့် Android ဖုန်း လုံခြုံရဲ့လား ??
AVG PC Tune up 2014
iTools 2013 Build 0922 Released
Currency exchange rate apk
blog မှာနံပါတ်နဲ့ newer post နဲ့ older post ကိုပုံ...
သန္တာဗိုလ် - နားလည်ပေးပါ … ကို
Android APK တွေကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်ရင် ဆော့ဝဲလ်တွေပါ...
Android ရဲ့ battery အသုံးပြုမှုတွေကိုပြသပေးမဲ့ Batt...
X Video Editor- Beautify video (Andriod ဖုန်းတွေမှ...
Mobile Guide Issue Vol-2 ၊ Issue-121 (23.9.13)
့Huawei ဖုန်းများအတွက်(သီးသန့် ) ကုဒ်နံပါတ်များ
facebook ကိုလော့ မကျအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ(ဖတ်ပေးပါရ...
Phone ပြောသမျှကို မှတ်ထားပေးမဲ့ Call Recorder Full...
ဗေဒင်ဝါသနာ ပါ သူများအတွက် Wheel of fortune apk ((9...
Smurfs’ Village v1.2.9a Unlimited APK!!!!!
Huawei Firmwares တွေကိုရှာဖွေပေးမဲ့ Huawei Firmwar...
Android ဖုန်းပေါ်မှာလက်တွေ့ အသုံးချပညာ(မြန်မာလို)
Real Soccer 2013 V.1.0.6 Offline Full Version APK ...
3D မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဂိမ်း Adrenaline Outlaws
Lucky Patcher v3.5.8 APK
Pro Evolution Soccer PES 2014(ဘောလုံးဂိမ်း)
Nero 2014 Platinum 15.0
FIFA 14 By EA SPORTS™ V1.2.8 (Money Mod) Apk+Data
Document တွေကို မိမိအလိုရှိတဲ့ ဖိုင်ကိုပြောင်းဖို့...
iTools 2013 Beta 0524 နောက်ဆုံထွက် 5c တို့  5s တို...
နန်းဆုရတီစိုး – ရှေ့ဆက်သွားမှာပဲ (Forward) (2013) ...
တောင်ဆင်းအတိုင်း စက်ဘီးစီး ကြရမဲ့ Stickman Downhil...
Android ပေါ်မှာ သုံးရမဲ့ Firefox Browser for Androi...
FIREFOX 25 BETA 1 update အသစ်လေးပါ
EZ CD Audio Converter 1.3.1.1 + Crack
Android ဖုန်းတွေမှာ Pattern / Pin lock ကျနေတာကို ဖ...
Android 4.2.2 အထက်ထိ မြန်မာစာ မှန်တဲ့ MMSD Smart Z...
Video Editing သမားတွေအတွက် Sony Vegas Pro 12 Full ...
PES apk & data
Samsung Galaxy Ace gts7500L ကို ICS 4.0.4 Rom တင်န...
မြန်မာတို့အတွက် WHIZZO Dictionary Free Version ( 1...
ကွန်ပျူတာရဲ့ hard disk space ကိုနေရာပြန်ချပေးမဲ့ A...
Nero Burning ROM 2014 v15.0 Cracked
Window Boot Manager Error ဖြေရှင်းနည်း
imobile i style 7.1 ကိုrootသွင်းပြီးမြန်မာစာထည့် မ...
Karaoke စာတန်းထိုး ပြုလုပ်နည်း (Adobe After Effect...
universal hard reset tool for android
မိတ်ဆွေများဆိုတဲ့ Blog List လေးတွေကို စကိုးဘားလေးန...
တင်ထားသမျှအားလုံး တနေရာထဲကနေ ရှာဖွေနိုင်တဲ့နည်းလမ်...
ဘလော့ပေးမှာ စာလုံး အကြီး+အသေး ကလစ်ဖတ်နိုင်ရန်
မိမိရ့ဘလော့linkတွေကိုscrolling နှင့်လုပ်ချင်ရင် လု...
ဘလော့ကာရဲ့ HTML ပုံစံ ပြောင်းလိုက်ပါပြီ (ဘလော့ကာတိ...
ဘလော့ အပေါ်အောက် အလွယ်ချပေးနိုင်မဲ့ ခလုပ်လေး